Wor Craven's 'Deadly Friend' Factor Sc-Blu-Ray dia manana endri-javatra miavaka manaitra - iHorror
Home Blu Rays Wor Craven's 'Deadly Friend' Scream Factor Blu-Ray dia manana endri-javatra miavaka manaitra
Wor Craven's 'Deadly Friend' Scream Factor Blu-Ray dia manana endri-javatra miavaka manaitra
Lisitry ny fampiasa manokana
by Trey Hilburn III Septambra 12, 2021 529 hevitra
Wes Craven's Namana mahafaty dia mankany amin'ny Shout! Factory Blu-Ray amin'ity volana Oktobra ity. Ny tantaram-pitiavana Wes Craven dia toy izany Siansa hafahafa mihaona Fijanonana Mall afangaro amin'ny tantaram-pitiavana hafahafa. Izy io koa dia manasongadina ny iray amin'ireo famonoana olona tsy mataho-doza indrindra izay natao hatrizay tamin'ny sinema. Ahitana basikety sy Anne Ramsey sy Kristy Swanson.
Mivadika ho ahy izy ireo Namana mahafaty mandeha toy izao:
Paul genius irery tovolahy Paul (Matthew Labyorteaux, Barbarians At The Gate), manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana ao amin'ny ati-doha, dia manana namana roa: ny robot miavaka… ary ilay tovovavy tsara tarehy eo akaikiny (Kristy Swanson, Buffy The Vampire Slayer). Rehefa sendra voina ny sakaizany roa dia manandrana mamonjy azy ireo amin'ny alàlan'ny fanosehana ny teknolojia mihoatra ny fetra mety maty ho any amin'ny tontolo vaovao mampihorohoro izy.
Famokarana amin'ny Namana mahafaty somary nanakorontana. Tamin'ny voalohany, nisy ny fikasana ny hampifantoka bebe kokoa ilay sarimihetsika amin'ireo mpilalao sy tantaram-pitiavana. Na izany aza, taloha kelin'ny namoahana ilay sarimihetsika dia niditra an-tsehatra i Warner Bros ary nitaky fihetsika mahery setra sy herisetra bebe kokoa. Izany no mahatonga ny herisetra ao amin'ny sarimihetsika, ao anatin'izany ny fipoahana ny lohan'i Ramsey izay mahatsapa ho tsy mifanaraka amin'ny toerany. Somary navoaka ny famoahana azy io, saingy nahavita nahita ny mpihaino azy izy, na dia tsy mpihaino marobe hitany aza.
Ny filaharana ho an'ny endri-javatra manokana dia toy izao:
Fizahana 2K Vaovao ny interpositive
NEW Hey Sam, Nice Shot - resadresaka nifanaovana tamin'ny mpilalao sarimihetsika Kristy Swanson
Vaovao voasoratra anaty rà - resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanoratra ny mpanoratra Bruce Joel Rubin
NEW Robots, Ramsey ary Revenge - resadresaka nifanaovana tamina mpanakanto mpanao hatsikana manokana Lance Anderson
NEW Samantha's Symphony - resadresaka nifanaovana tamin'ny mpamoron-kira Charles Bernstein
Tranofiara teatra (amin'ny anglisy, espaniola ary alemà)
Ianao dia afaka mankanesa any amin'ny Hihiaka! Pejy Factor hahazoana ny pre-order anao in.